विवाह बिच्छेदकै लागि हो त? | नेपालको सम्झना
Browse » Home » रोचक जानकारी » विवाह बिच्छेदकै लागि हो त?
विवाह बिच्छेदकै लागि हो त?
भनिन्छ विश्वास तोडिनैका लागि हो । भने के प्रेम टुट्नैका लागि र विवाह विच्छेदकै लागि हो ? टाढा किन जाने, सन् २००९ भरि बलिउडे जोडीका ‘ब्रेक अप’ सम्झने हो भने भन्नैपर्छ सम्बन्धहरु विच्छेद हुनैका लागि हो कि त !
यो वर्ष विछोडको पीडा झेल्न विवश बलिउड हस्तीहरूको सम्बन्ध सूचीको अग्रपंक्तिमा दीपिका पादुकोण र रणवीर कपुर, पि्रयंका चोपडा र हरमन बवेजा, कंगना रानावत र अध्ययन सुमन, पि्रयंका चोपडा र साहिद कपुर, कोकणा सेन र रणवीर सौरी, पि्रटी जिन्टा र नेस बाडिया परेका छन् ।सबैभन्दा बढी चर्चित ब्रेकअपको सूचीमा दीपिका पादुकोण र रणवीर कपुर रहे । कुनै बेला कस्तोसम्म हल्ला चल्यो भने दीपिका कपुर खानदानकी बुहारी बन्दै छिन् । तर वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा उनीहरूको प्रेमको डोरी चुँडिएन मात्रै, एउटाले अर्काको मुखै पनि हेर्न नचाहने दिन आयो । हालै एक निर्माता र निर्देशक अफरलाई दीपिकाले अस्वीकार गर्दै ठाडै भनिन्, ‘रणवीर भएको फिल्ममा काम गर्दिनँ ।
चल्तीका नायक-नायिका बनेकाले दुवै व्यस्त भएका र एकअर्कालाई समय दिन नसकेका कारण सम्बन्ध टुक्रिएको तर्क अघि सारिए पनि रणवीर र क्याटि्रना कैफबीच बढेको सम्बन्धले यिनको प्रेमको सानो संसार भताभुङ्ग भएको हो भन्छन् जानकारहरू । हुन पनि पछिल्ला दिनमा रणवीर र क्याटि्रनाको सम्बन्ध बलिउडमा चर्चित छ ।
यसैगरी एकै वर्ष दुई-दुई प्रेमी बनाएर पनि दुवैसित विछोडिएकी पि्रयंकाको हरमन बवेजासँग टुक्रिएको सम्बन्ध बलिउडको वर्षको दोस्रो चर्चित विच्छेद हो । उनीहरूबीचको विछोडको मुख्य कारण हो पि्रयंका सफलताको शिखरतिर चुलिनु र हरमनका फिल्महरू फ्लप हँुदै जानु । हल्ला के छ भने फिल्म ‘लभस्टोरी २०५०’ र ‘ह्वाट्स योर राशि’ को असफलताले यी दुईबीच फाटो ल्याउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्‍यो जसले गर्दा सोच्दै नसोचिएको एउटा ब्रेकअपको चर्चाले बलिउड हल्लियो ।
अर्कोतर्फ करिना कपुरसँग सम्बन्ध टुक्रिएपछि एक्लो जीवन बिताइरहेका साहिद कपुरको नजिक हुन पुगिन् पि्रयंका जो आफैं हरमन बवेजासँगको विछोडपछि असल प्रेमी नभएर भौतारिरहेकी थिइन् । फिल्म ‘कमिने’ मा सँगै काम गर्दा बढेको सम्बन्धले उनीहरू प्रेमी-प्रेमिका हुन पुगे । तर यो वर्षका दोस्रा प्रेमी साहिदसँगको सम्बन्धलाई पनि पि्रयंकाले धेरै दिन टिकाउन सकिनन् । यी दुवै बलिउड सितारा अहिले विछोडको पीडा झेल्दै छन् ।
यस्तै बलिउड चर्चित यो वर्षको अर्को ब्रेकअपमा परेको छ, कंगना रानावत र अध्ययन सुमनको सम्बन्ध । करिब-करिब वर्षभर नै एक-अर्कासँगै बसेर पनि यी दुई छुट्टएिका छन् । सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनीहरू दुवैजनाले मिलेरै एक-अर्कासँग छुट्टनिे निर्णय गरेका हुन् । बिछोडिनुपर्दा अध्ययन निकै रोएका थिए भने कंगनामा त्यसको कुनै असर देखिएको थिएन । उनले ब्रेकअपलाई सहज रूपमा लिएकी थिइन् ।
यसैगरी चार वर्ष लामो सम्बन्धसमेत टुक्रिएपछि २००९ को चर्चित ब्रेकअपको सूचीमा रह्यो कोकणा सेन र रणवीर सौरीको प्रेम । उनीहरू यसै वर्ष बिहे गर्ने तयारीमा थिए रे । तर दैवले तिनको भाग्यमा अर्कै लेखेको रहेछ, उनीहरूले त उल्टै छुट्टनिे निर्णय लिएर सबैलाई छक्क पारे । उता गालामा सेक्सी डिम्पलका लागि लोकपि्रय हिरोइन पि्रटी जिन्टाको ब्रेकअप पनि बलिउडमा यो वर्ष चिया गफको मुख्य चारो बन्यो । यद्यपि उनका प्रेमी नेस वाडिया बलिउड हस्ती नभई व्यवसायी थिए । धनी प्रेमी नेससँगको सम्बन्धपछि पि्रटीले एक क्रिकेट टिम खरिद गरेकी थिइन् । उनीहरू चाँडै विवाहबन्धनमा बाँधिने चर्चा पनि सञ्चारमाध्यममा छाएको थियो । तर दिलको सम्बन्ध टुक्रिएर व्यापारमा मात्र सीमित हुने गरी खुम्चियो । ब्रेकअपपछि अब पि्रटीले प्रस्टीकरण दिएर भ्याइरहेकी छैनन् । उनी भनिनरहेकी हुन्छिन्, ‘नेस अब मेरो बिजिनेस पार्टर मात्र हो ।’
"अनलाइन खबरबाट साभर"
0 comments to “विवाह बिच्छेदकै लागि हो त?”